ခွဲခန်းဓါးနှင့် စက်ရုပ် – အနာဂတ်ရဲ့ ခွဲစိတ်ခန်း? – မပမရ ခွဲခန်းဓါးနှင့် စက်ရုပ် – အနာဂတ်ရဲ့ ခွဲစိတ်ခန်း? – မပမရ
ယခုချိန်မှာ ဘဝ၏ နယ်ပယ်များစွာတွင် စက်ရုပ်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည် နှင့် တိကျမှု ကျေးဇူးကြောင့် တူညီသော အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များကို အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်ရမည့် အထူးသဖြင့် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသော သတ္တုလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့သည် လွယ်ကူချောမောစေသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဘဝကို ပိုမို လွယ်ကူစေနိုင်သော သူနာပြုကဏ္ဍတွင် ပထမဆုံး ရှေ့ပြေးပုံစံများကို အသုံးပြုနေပါသည်။ နောက်ထပ် အသုံးပြုသော နယ်ပယ်မှာ ဆေးပညာရပ်တွင် ဖြစ်သည်။ စက်ရုပ်သည် အလွန့်အလွန် တိကျမှု လိုအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အတွက် အကူ အဖြစ်ရှိနေနိုင်သည်။
ဤအသုံးချမှုသည် မတူညီသော အဆင့်များသို့ တိုးတက်လာပါသည်။ အဝေးထိန်းချုပ် ကိရိယာအဖြစ် လုပ်ဆောင်သော စက်ရုပ်များလည်း ရှိသည်။ ဆရာဝန်သည် ထိန်းချုပ်သူအဖြစ် ရှိနေပြီး စက်ရုပ်မှာ လူနာအပေါ်တွင် လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်မှုကဲ့သို့ စံသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤနည်းလမ်းဖြင့် မကြာခဏ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အထူး တိကျမှု လိုအပ်ခြင်း နှင့် လူနာအား ဖြစ်လာနိုင်သော ထိခိုက်နစ်နာခြင်းကို လျော့နည်းစေလိုခြင်းကြောင့် ဥပမာ − အနာရွတ်အသေးငယ်များ မှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း − အဆိုပါတီထွင်မှုသည် ဤဦးတည်ရာသို့ သွားပါသည်။
နောက်တစ်ဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုမှာ သံလိုက်စက်ကွင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော “နာနိုစက်ရုပ်များ” ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရွယ်အစားအားဖြင့် စင်တီမီတာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ဥပမာ − မျက်လုံးခွဲစိတ်ခြင်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဤကဲ့သို့ အလွန်ထိခိုက်လွယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စက်ရုပ်ငယ်များသည် အလွန်အကူအညီ ဖြစ်သည်။
သို့သော် စက်ရုပ်အား အလိုအလျောက် ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုရန်မှာ ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံး နှင့် အရေးအကြီးဆုံးမှာ လူနာ၏ ကျန်းမာခြင်းသည် အမြဲတမ်း ရှေ့ဆုံးတွင် ရှိနေပြီး ဆရာဝန်များသည် စက်ရုပ်မှ ၎င်းကို အတိုင်းအတာမည်မျှအထိ အာမခံနိုင်သည်ကို အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးနေကြပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ လောလောဆယ်တွင် စက်ရုပ်များသည် စံသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းတာဝန်များစွာအတွက် အလားအလာရှိသော အလွန့်လက်တွေ့ကျသည့် ကူညီသူ အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ခေတ်မီဆေးပညာရပ်အကြောင်း ထိုးထွင်သိမြင်မှု ရရှိရန်။
ခွဲစိတ်ခန်းများထဲတွင် စက်ရုပ်များကို အသုံးပြုနေပြီးဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်စေရန်။
ဆေးပညာရပ်တွင် စက်ရုပ်များ၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အသုံးချမှုများကို သိရှိရန်။
ဆေးပညာရပ်တွင် စက်ရုပ်များ၏ အားသာချက်များ နှင့် အားနည်းချက်များကို နားလည်ရန်။
မိနစ် ၆၀ ခန့် (ဆွေးနွေးမှုအပေါ် မူတည်သည်)